US Kufamba kuenda kuEurope: Mutungamiri Kuburitsa Mashoko Mumazuva mashoma
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » US Kufamba kuenda kuEurope: Mutungamiri Kuburitsa Mashoko Mumazuva mashoma
avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Merkel naBiden vanokurukura US Kufamba kuenda kuEurope
Chancellor weGerman Angela Merkel ndiye aive mutungamiri wekutanga weEuropean kushanyira Mutungamiri weUS Joe Biden kuWhite House sezvo misoro inosanganisira yekuUS kuenda kuEurope ichikurukurwa.
Chancellor weGerman Angela Merkel ndiye aive mutungamiri wekutanga weEuropean kushanyira Mutungamiri weUS Joe Biden kuWhite House sezvo misoro inosanganisira yekuUS kuenda kuEurope yaive pachirongwa.
Misoro yehurukuro mbiri idzi yaisanganisira shanduko yemamiriro ekunze, majekiseni eECOVID-19, Russian cyber kurwisa, Ukraine nekukwidziridza mademokrasi avo, pamwe nekufamba pakati peUS neEurope.
Kuwedzera kwechangobva kuitika mumakesi e COVID-19 nekuda kwekusiyana kweDelta kwakabatirira kuUS kurerutsa zvirango zvekufamba parizvino.
Chancellor Merkel akataridza kuti ane chivimbo nechikwata cheAmerican COVID.
Mutungamiri Joe Biden vakati vachakurumidza kupindura mibvunzo pamusoro pekufamba kuenda kuUS kubva kuEurope sezvo vakaunza nhengo dzechikwata chavo cheCOVID apo Chancellor Merkel akasimudza mubvunzo uyu panguva yehurukuro dzavo mbiri nhasi. Merkel akati ane "chivimbo chese muchikwata cheAmerican COVID."
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Europe yakarerutsa zvirambidzo kune vafambi vekuAmerican mwedzi wapfuura, iyo US iri kuchengetedza zvakatemerwa zvirango zvekufamba munzvimbo nekuda kwekupararira kwe iyo Delta musiyano.
US Travel Association Executive Mutevedzeri Wemutungamiri wePublic Affairs uye Policy Tori Emerson Barnes akaburitsa chirevo chinotevera pane zvakataurwa nemutungamiri Biden pakuvhurazve kwekufamba kwenyika:
"Tinogamuchira zvakataurwa nemutungamiriri wenyika, zvataurwa nhasi naChancellor weGerman, Angela Merkel, kuti rumwe ruzivo nezve nguva yekubvisa kurambidzwa kwekufamba kwenyika rwunogona kuuya 'mukati memazuva anotevera.'